ချစ်ခြင်းမေတ္တာ - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
အပတ်စဉ် Taroscopes မေလ 15 များအတွက် LIVE - အကြားအမြင်ရအလတ်စား Karleen နှင့်အတူ 21!
Megan မေလ 15, 2017 13 မှတ်ချက် မေလ 15 များအတွက်တိုက်ရိုက်အပတ်စဉ် Taroscopes အပေါ် - အကြားအမြင်ရအလတ်စား Karleen နှင့်အတူ 21!
မေ 2017 အတွက်အလွန်အရေးကြီးမွငျ့မွတျပြည်ထောင်စု MESSAGES များ
Megan မေလ 4, 2017 19 မှတ်ချက် မေ 2017 အတွက်အလွန်အရေးကြီးမွငျ့မွတျပြည်ထောင်စု MESSAGES များပေါ်
မေလများအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုချွတ်နှုန်းဖတ် 50! https://nataliepachel.acuityscheduling.com/schedule.php Vimeo ကဒီမှာ: https://vimeo.com/ondemand/lovemay1 သင်ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာများမှာ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အဘိဥာဏ်ဒိုင်ယာရီ Sara Perry အဘိဥာဏ်နှင့်အတူနေ့စဉ်အကျဉ်းဖော်ပြချက်များနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် 4th နိုင်ပါစေ
Megan မေလ 4, 2017aComment ချန်ထား အဘိဥာဏ်ဒိုင်ယာရီအပေါ် Sara Perry အဘိဥာဏ်နှင့်အတူနေ့စဉ်အကျဉ်းဖော်ပြချက်များနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် 4th နိုင်ပါစေ
တစ်အဘိဥာဏ်က Sara Perry ၏နေ့စဉ်ဒိုင်ယာရီ။ ဘဝနှင့်မည်သို့သောအရာတို့ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့် ပတ်သက်. အထွေထွေချက်တင်။ ပုဂ္ဂလိကဖတ်ငါ့ကို www.saraperrypsychic.co.uk သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ကိုသွားဘို့ [အီးမေးလျ protected] [ ... ] မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Pisces မေလ 2017 အကြားအမြင်ရဗေဒင် Insights နှင့် Sara ပယ်ရီအကြားအမြင်ရအားဖြင့်ဟောကိန်းများ
Megan ဧပြီလ 30, 2017aComment ချန်ထား Pisces မေလ 2017 အကြားအမြင်ရဗေဒင် Insights နှင့် Sara ပယ်ရီအကြားအမြင်ရအားဖြင့်ဟောကိန်းများအပေါ်
ပုဂ္ဂလိကဖတ်နှင့်ထုတ်ကုန်အပေါ်အချက်အလက်များအတွက်အစီအစဉ်များနှင့်ကုထုံးကိုငါ့က်ဘ်ဆိုက် www.saraperrypsychic.co.uk ကိုသွားဒါမှမဟုတ်မှာငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ [အီးမေးလျ protected]
Sara Perry အကြားအမြင်နဲ့ Leo မေ 2017 အကြားအမြင်ဗေဒင် Insight နှင့်ခန့်မှန်းချက်
Megan ဧပြီလ 30, 2017aComment ချန်ထား Sara Perry အကြားအမြင်နဲ့ Leo မေ 2017 အကြားအမြင်ဗေဒင် Insight နှင့်ခန့်မှန်းချက်အပေါ်
Taurus မေလ 2017 အကြားအမြင်ရဗေဒင် Insights နှင့် Sara ပယ်ရီအကြားအမြင်ရအားဖြင့်ဟောကိန်းများ
Megan ဧပြီလ 30, 2017aComment ချန်ထား Taurus မေလ 2017 အကြားအမြင်ရဗေဒင် Insights နှင့် Sara ပယ်ရီအကြားအမြင်ရအားဖြင့်ဟောကိန်းများအပေါ်
မေဂလိုဘယ်အကြားအမြင်ရဟောကိန်းများ / အဝေးမှကြည့်
Megan ဧပြီလ 27, 2017aComment ချန်ထား မေဂလိုဘယ်အကြားအမြင်ရဟောကိန်းများ / Remote အမြင်အပေါ်
[ ... ] အားလုံးမင်္ဂလာပါသင့်အကြားအမြင်ရ, လဗေဒင် tarot များအတွက်စိတ်ဝိညာဉ်၏အလိုလိုစာဖတ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်အဘိဥာဏ်ဖတ်ကမ္ဘာတဝှမ်းသင်သွားလေရာရာ၌မှ: မေလများအတွက်ကြည့်ရှု, အဆိုပါ Global ဟောကိန်းများမင်္ဂလာပါ
အလတ်စား Karleen နှင့်အတူအပြည့်အဝလအကြားအမြင်ရ tarot horoscopes! 10th 16 မှဧပြီလ 2017
Megan ဧပြီလ 9, 2017aComment ချန်ထား အလတ်စား Karleen နှင့်အတူအပြည့်အဝလအကြားအမြင်ရ tarot horoscopes အပေါ်! 10th 16 မှဧပြီလ 2017
http://www.astrolada.com/readers/karleen.html: karleen အတူစာဖတ်ဘို့ Karleen နှင့်အတူ Taurus ပေါ်ထွန်းခြင်း cirlce http://www.astrolada.com/courses/new-moon-taurus.html အတွက်လဆန်းများအတွက် www.AstroLada.com
အကြားအမြင်ရအလတ်စား Karleen နှင့်အတူအပတ်စဉ်ဗေဒင် Tarot Horoscopes နှင့် Chakra ဖတ်အားလုံး 12 ဆိုင်းဘုတ်များ!
Megan ဧပြီလ 2, 2017aComment ချန်ထား အကြားအမြင်ရအလတ်စား Karleen နှင့်အတူအားလုံး 12 ဆိုင်းဘုတ်များအပတ်စဉ်ဗေဒင် Tarot Horoscopes နှင့် Chakra ဖတ်ပေါ်!
အကြားအမြင်ရအလတ်စား Karleen ကနေအပတ်စဉ်ဗေဒင် Tarot Horoscopes နှင့် Chakra ကဒ်ဖတ် 3th မှမတ်လ9။ http://www.astrolada.com/readers/karleen.html www.AstroLada.com: Karleen အတူစာဖတ်ခြင်းများအတွက်
ကုံဧပြီလအကြားအမြင်ရ Tarot 2017 ဖတ်နေ
Megan မတ်လ 30, 2017aComment ချန်ထား ကုံအပေါ်ဧပြီလအကြားအမြင်ရ Tarot 2017 ဖတ်နေ
Libra, ဧပြီလ 2017 အကြားအမြင်ရဗေဒင် Insights & Sara ပယ်ရီအားဖြင့်ဟောကိန်းများ
Megan မတ်လ 29, 2017aComment ချန်ထား Libra, ဧပြီလ 2017 အကြားအမြင်ရဗေဒင် Insights & Sara ပယ်ရီအားဖြင့်ဟောကိန်းများအပေါ်
ပုဂ္ဂလိကဖတ်များအတွက် Sara ပယ်ရီအားဖြင့် Libra အကြားအမြင်ရဗေဒင် Insights & ဟောကိန်းများမှာ www.saraperrypsychic.co.uk ဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်ပို့သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး [အီးမေးလျ protected] [ ... ] သင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြှနျုပျ၏6ခြေလှမ်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်စစ်ဆေး